Asthenosphere: kedu ihe ọ bụ, njirimara ya na etu o si dị mkpa | Network Meteorology
Otu n'ime akwa ụwa achọtara n'okpuru lithosphere bụ mbara ụwa. Ọ bụ akwa nke mejupụtara tumadi nkume siri ike nke na-etinye nrụgide na okpomọkụ dị ukwuu nke na ọ nwere ike ịkpa àgwà n'ụzọ plastik ma na-asọ. A na-akpọ ya oyi akwa a na-akpụzi n'ihi ọdịdị ya na nhazi ya. Ihe nkpuchi a nwere otutu ihe omuma banyere ihe omuma nke uwa anyi na ihe omumu banyere ala.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara mbara igwe.
2 Ebugharị ndị na-ebugharị na mbara igwe
3 Ọsọ nke ebugharị ntụgharị na ịdị mkpa nke mbara igwe
Nkume ndị dị na mbara igwe nwere ntakịrị njupụta karịa ndị a hụrụ na Ala jikọrọ ọnụ. Nke a na-eme ka teknụzụ teknụzụ ndị lithosphere na-agagharị n’elu ụwa dịka a ga - asị na ha na - ese n’elu mmiri. Ha na-eme ngagharị a site na ịrịgo ugwu ma ha na-eji nwayọ nwayọ nwayọ.
Otu ụzọ isi kpọọ mbara igwe bụ uwe elu. Anyị na-echeta na a na-ekewa oyi akwa nke ụwa n'ime 3: jikọrọ ọnụ, uwe na isi. Akụkụ ndị ahụ nke ụwa dum ebe anyị nwere ike ịchọta mbara igwe dị nso na elu ụwa dị n'okpuru oke osimiri. Nke a bụ ebe enwere ụfọdụ ebe oke pere mpe nke lithosphere. Ekele maka mpaghara ndị a, enwere ike nyochaa ihe mejupụtara na usoro nke mbara igwe.
Ogologo dum nke oyi akwa nke ụwa sitere na 62 ruo 217 kilomita. Enweghị ike tụọ ọnọdụ ya ihu igwe mana enwere ike ịmata ya site na nyocha ndị na-apụtachaghị ìhè. Ekwenyere na ọ nwere ike ịdị n'etiti 300 na 500 Celsius. N'ihi oke okpomọkụ a ọ na-aghọ akwa akwa ductile kpamkpam. Nke ahụ bụ, ọ nwere ederede nwere ike ịkpụzi dị ka à ga-asị na anyị na-eme ihe yiri nke putty.
Dị ka anyị kwuru na mbụ, okwute ndị ahụ nwere ntakịrị ihe ma na-agbaze nke ọma. Nke a bụ n'ihi na agwakọta nke okpomọkụ dị elu na nnukwu nrụgide ha na-atachi obi.
Ebugharị ndị na-ebugharị na mbara igwe
N'ezie i nuwo nke Jehova convection ugbu a nke uwe elu ụwa. Mmiri iyi ndị a na-ebugharị ga-abụ n'eziokwu na a na-ebufe okpomọkụ site n'otu ebe gaa na ebe ọzọ site na ngagharị nke mmiri dị ka nkume a wụrụ awụ. Ọrụ mbufe ọkụ nke mmiri iyi na-ebugharị bụ ndị na-eme ka mmiri na ebili mmiri nke ụwa, ihu igwe nke ikuku, na geology.
N'ihi mmeghari a nke okpomoku dị n'ime ya na nkume a wụrụ awụ, efere tectonic nwere ike ịmegharị. Nke a bụ isi ihe kpatara na etinyeghị kọntinenti n'otu ebe, mana na-agagharị kwa afọ n'agbanyeghị na ha pere mpe pere mpe. Naanị ihe dị ka puku afọ iri, kọntinent akwagala naanị otu kilomita. Agbanyeghị, ọ bụrụ na anyị enyochaa nke a n'ọtụtụ geological oge Anyị nwere ike ikwenye na, n'ọdịnihu ọtụtụ nde afọ site ugbu a, ọ ga-ekwe omume na teknụzụ tectonic ahụ ga-amaliteghachi ihe otu ụbọchị a maara dị ka nnukwu kọntinent a na-akpọ Pangea.
Ntughari di iche na nmekorita ebe nke ikpeazu bu nyeghari oku n’etiti ihe ndi no n’onodu. Ihe na-eme ka mmiri na-erubata uwe mmadụ bụ nkume a wụrụ awụ na miri emi ndị na-agagharị n'ihi mgbanwe ọnọdụ okpomọkụ. Nkume ndị a nọ n’ọnọdụ ọkara mmiri ka ha nwee ike ịkpa àgwà dịka mmiri ndị ọzọ. Ha na-esi na ala uwe elu ahụ bilie wee na-adịwanye ọkụ ma na-adịchaghị ala n'ihi ọkụ nke isi ụwa.
Dị ka oke nkume na-efunahụ okpomọkụ ma na-abanye n'ime ala ụwa, ọ na-adịwanye jụụ ma, ya mere, ọ na-adịwanye njọ. N'ụzọ nke a ọ na-agbadata ọzọ na ntọala ahụ. Ekwenyere na nrughari a nke okwute a wụrụ awụ bụ ihe na - eme ka ọ bụrụ ugwu ugwu, ala ọma jijiji na mwepụ nke kọntinent.
Ọsọ nke ebugharị ntụgharị na ịdị mkpa nke mbara igwe
Ọsọ nke ihe mkpuchi nke uwe mkpuchi na-abụkarị ihe dịka 20mm / afọ, yabụ enwere ike iwere ya dị ka ihe bara uru. Nke a convection dị elu na uwe elu karịa convection dị nso na isi. Naanị otu mbugharị ntụgharị na mbara igwe nwere ike were afọ 50. Maka nke a, anyị ekwuola tupu ọ dị mkpa inyocha usoro ndị a niile site na oge ọmụmụ. Mgbanwe ntụgharị miri emi nke uwe mwụda ahụ nwere ike were ihe dịka narị afọ abụọ.
Banyere mkpa mbara igwe, anyị nwere ike ịsị na ọ na-emetụta ikuku site na mmegharị nke oke osimiri na kọntinent kọntinent. N'otu oge ahụ, ọnọdụ kọntinenti na oke osimiri na-agbanwekwa ụzọ ikuku na ihu igwe si agagharị na mbara ụwa. A sị na ọ bụghị maka mmiri ndị a na-ebugharị ebugharị, mmegharị ahụ anyị kpọtụrụ aha dịka kọntinent agaghị adị. Ọ bụ ya mere maka ntọala ugwu, mgbawa ugwu na ala ọma jijiji.
Agbanyeghị na enwere ike iwere ihe omume ndị a ka ọ bụrụ ihe na-agbawa obi na obere oge, enwere ọtụtụ elele na usoro oge ala dịka nguzobe ndu ohuru ohuru, ihe okike nke ebe obibi ohuru na mkpali nke imeghari nke ndi di ndu. Mmetụta dị iche iche nke mbara igwe nwere n'ụwa na-eje ozi ka ndụ wee dịrị n'ụdị dịgasị iche iche.
Na mgbakwunye, asthenosphere nwekwara oke maka kee ụwa ọhụụ ọhụrụ. Ebe ndị a dị na oke osimiri oke osimiri ebe convection na-eme ka mbara igwe a ruo n'elu. Ka ihe ahụ a wụrụ awụ nke gbapụchara agbapụ, ọ na-ajụ oyi, na-eme ka eriri ọhụrụ mara.
Enwere m olile anya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere mbara igwe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Ihe niile ịchọrọ ịma banyere mbara igwe
Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara Holocene